My freedom: Candy is Burmese
Candy is Burmese
ကန်ဒီ ပိုစ့်တစ်ခုနဲ့တစ်ခု ဆက်တိုက် မတင်တတ်တာ အားလုံးအသိပါ။ မပြောမပြီး မတီးမမြည်မို့လို့ ပြောပြပါရစေ။ စိတ်ကသိကအောင့် ဖြစ်စရာလေးပါ။ စာဖတ်သူများ.. ဘလော့ဂါသူငယ်ချင်းများကို အလွန့်အလွန်ချစ်သောကန်ဒီသည် Gtalk Request များကို လက်ခံပါသည်။ ဇာတ်လမ်းအစကတော့....
Candy: hi hi
Candy: ကောင်း၏ မင်္ဂလာ ညချမ်းပါ :D
Someone: me too
Candy: အင် you too လုပ်ပါ
သူ့ကျမှ me too တဲ့
Candy: အင် စနေတာပါ ဟဟ
Someone: ...... ပါ
Candy: ခုက စင်္ကာပူမှာ
Candy: အင်.. ဖဲ့မိလို့လား
Candy: ဖဲ့တယ် မခေါ်ဘူး
Candy: ဟဟ စလုံးသူမဟုတ်ပါဘူး
Candy: ဟဟဟ ဒီရောက်တဲ့သူတွေကို အမြင်စောင်းနေပုံပဲ
Candy: ခုတောင် တိုးတက်နေပြီလေ
Candy: တချိန်ချိန်တော့ ပြန်လာမှာပေါ့
Candy: အော် အမြင်စောင်းနေတဲ့သူကို ဘာဆက်ပြောရမလဲ
Someone: အော် အော်
Candy: အင်... ဘယ်လိုဖြစ်လို့လဲ
Candy: အင်း ဒါတော့ ဟုတ်တယ်
Candy: နိုင်ငံခြားသူတွေလိုဖြစ်နေတယ်လို့ ပြောချင်တာလား
Someone: အင်ပေါ မြန်မာမိန်းကလေတွေပေါ
Someone: ပြန်တောမယ်နော် စလုးံသူလေ
Candy: ဟုတ်ကဲ့ရှင့် တာ့တာ
(Block လိုက်ပါပြီ ရာသက်ပန်တာ့တာပါ :P :D)
အဲ့ဒါပါပဲ။ အားလုံး သတိထားမိကြလား မသိဘူး။ ကန်ဒီ စလုံးကလို့ ပြောလိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီး စကားပြောပုံတွေက သိသိသာသာပြောင်းလဲသွားတာ။ အဲ့ဒါဘာလို့လဲ။ စလုံးမှာနေတာနဲ့ မြန်မာမဟုတ်တော့ဘူးလား။ ဒီမှာ နေနေရတာကို တော်တော်သက်သက်သာသာနဲ့ ပျော်ပျော်ကြီးနေနေကြတယ်များ ထင်နေတာလား။ ကျောင်းသားဆိုလည်း ကျောင်းသားအလျောက် သေလုမတတ် စာလုပ်ရတယ်။ အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေကလည်း သေမတတ်လုပ်ရတာ။ သူများနိုင်ငံမှာ နေနေရတာ လွယ်တယ်များ ထင်နေလား မသိဘူး။ မိဘဆွေမျိုးမရှိ ကိုယ့်ကိစ္စအားလုံး ကိုယ်တိုင်လုပ်နေရတာ။ ဖျားရင်တောင် ဂရုတစိုက်မေးမယ့်လူ မရှိဘူး။ တချို့ကျောင်းသားတွေဆို ကျောင်းလခမလုံလောက်လို့ Part time ခိုးလုပ်ရတယ်။ Private ကျောင်းတွေဆို အလုပ်လုပ်ခွင့်မရှိဘူးလေ။ Part time လုပ်ရတာ ဘယ်လောက်ပင်ပန်းလဲ ကိုယ်တိုင်လုပ်ဖူးမှ သိတာ။ ကန်ဒီတရက်လုပ်ဖူးတယ်လေ။ အဲ့တရက်လူလိုတယ်ဆိုပြီး သူငယ်ချင်းခေါ်လို့။ ပြန်ရောက်တော့ အိမ်သာထဲမှာ ငိုတာ။ တခါမှ အဲ့လောက် ၀မ်းမနည်းဖူးဘူး။ ကန်ဒီ ကိုယ်တိုင်က ပျော့ညံ့တာလည်း ပါပါတယ်။ သူများတွေ လုပ်နိုင်ပြီး ကန်ဒီမလုပ်နိုင်လို့လေ။ ကန်ဒီတောင် တရက်ထဲလုပ်ပြီး ဒီလိုဖြစ်တာ နေ့တိုင်းလုပ်နေတဲ့ သူတွေကို အရမ်းကိုယ်ချင်းစာတယ်။ ပြောချင်တာက အဲလောက် မလွယ်ကူဘူးလို့ ပြောချင်တာ။ ဒီမှာ တချို့သူတွေ အလုပ်မရသေးခင်စပ်ကြား တနေ့ တနေ့စားရဖို့တောင် ရုန်းနေရတာ ကန်ဒီတွေ့ဖူးတယ်။ မြန်မာပြည်မှာဆို ဘယ်လောက်ဆင်းရဲဦးတော့ မိဘရှိတယ်။ အချိန်တန်ရင် ထမင်းတော့စားရတယ်။
ကိုယ့်နိုင်ငံကို အမိနိုင်ငံလို့ မထင်တော့ဘူးတဲ့။ ပြောပုံဆိုပုံတွေက မဟုတ်ဘူး။ တဖက်စောင်းနင်းတွေချည်းပဲ။ ကန်ဒီ့ဓာတ်ပြားဟောင်း ပြန်ဖွင့်ရရင်... အရာအားလုံးမှာ သူ့အကြောင်းနဲ့ သူရှိတယ်။ လူတစ်ယောက်စီမှာလည်း သူဦးတည်ရာနဲ့သူရှိတယ်။ အဲ့ဒါတွေကို မသိဘဲနဲ့ သူဘာလုပ်နေ လုပ်နေ သူ့ကိုမှန်တယ် မှားတယ် ပြောပိုင်ခွင့်မရှိဘူး။ မပြောသင့်ဘူး။ မြန်မာလူမျိုးဟာ ဘယ်နိုင်ငံရောက်ရောက် မြန်မာပဲ။ မြန်မာလူမျိုးတိုင်း မြန်မာပြည်ကို ချစ်တယ်။ ကန်ဒီလည်း မြန်မာပဲ။ မြန်မာဖြစ်ရတာ ဂုဏ်ယူတယ်။ ဒါဘယ်တော့မှ ပြောင်းလဲမှာ မဟုတ်ဘူး။ ဒီလိုအဖြစ်မျိုး ကိုမောင်သန့်ရေးဖူးတယ် ထင်တယ်။ ဖတ်ဖူးသလိုပဲ.. ကိုယ်တိုင်တော့ ခုမှကြုံဖူးတယ်ဗျို့ =.=
မှတ်ချက် - ထုံစံအတိုင်း Gtalk username ပြောင်းထားပါတယ်။
Posted by Candy at 1:58 AM
ကိုယ်ကိုတိုင်ထက် ဘယ်သူကများ ပိုသိမှာလဲ ကန်ဒီရေ... ထားလိုက်ပါ..လူအမျိုးမျိုး စိတ်အထွေထွေ မဟုတ်လား...
December 30, 2011 at 2:25 AM
ဟေး ဟေး ကန်ဒီရေ ဒါကြောင့် ကျနော်နဲ့ မချက်တာ
နိုင်ငံခြားမှာ နေတယ် အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတာ ကန်ဒီ ပြောသလိုပဲ မလွယ်ပါဘူး။ကျောင်းစာ အိမ်စာကလည်း ဆရာတွေ ပေးတာများလွန်းတယ်။ကျနော်ဆိုရင် တခါတခါ မေ့တယ်လို့ လိမ်တာ မမောသေးဘူး။
December 30, 2011 at 3:18 AM
အားရိုးရိုး...မိန်မိန်းကန်ဒီနော်...ကောကောတွတ်တွတ်နော်..ချိုင်းနိစ်နော်...မင်းကုလားဘာ လို့နှုတ်ဆက်တာက..မင်္ဂလာပါလို့ပြောပါတယ်နော်...စင်္ကာပူအကြောင်းလေးတစ်ခါရေးမိပါတယ်..တွတ်ကိုလဲ.ဘလော့ထဲပို့လိုက်တာလားမသိဖူး..ဒါကြောင့်ခုတလောမတွေ့တာဖြစ်မှာ..:( ကျို့မိယ....
December 30, 2011 at 3:37 AM
ဟုတ်တယ် ကန်ဒီရေ..ဒီမှာ နေမကောင်းရင် ကြည့်မဲ့သူ မရှိနဲ့ဘယ်လောက်စိတ်ပင်ပန်းမှန်း ရောက်နေတဲ့သူ အချင်းချင်းပဲ ကိုယ်ချင်းစာတာ..block ပစ်လိုက်
အမတော့ မြန်မာပြည်မှာနေပေမယ့် နိုင်ငံရပ်ခြားက မြန်မာတွေကို စာနာမိတယ်။ အမျိုးမျိုးကြားနေရတယ်လေ..။ ကန်ဒီလေးက ချစ်ချာရေး... ပါးကွက်လေးနဲ့...ဒါကိုမှ မြန်မာမဟုတ်ဘူးဆိုရင်လည်း...ပြောတော့ပါဘူးကွယ်နော..:)
ဟိုးစစတုန်းက သူငယ်ချင်းအရင်းတွေနဲ့တောင် အဲလိုတွေ ပြောခဲ့ရဖူးတယ်... ကယ်ပဲ...
December 30, 2011 at 7:51 AM
December 30, 2011 at 7:58 AM
တူပါတယ် တူပါတယ် မြန်မာမလေးပါး)
ဘလော့ပစ်လိုက်ဟေ့ မျက်စိရှုပ်တယ် အချိန်ပေးရတယ် လက်ညောင်းတယ် အာပေါက်တယ်
မယုံလာကြည့် နိုင်ငံခြားကလူတွေဘယ်လို အလုပ်လုပ်နေထိုင်နေရတယ်ဆိုတာ
သူတို့လို အိမ်က ၅၀၀ လောက်ယူ အင်တာနက်ဆိုင်လေး လာ ကျု လက်ဖက်ရည်ဆိုင် အားတိုင်းထိုင်လို့ရတဲ့ဘ၀များမှတ်နေလားမသိ
နိုင်ငံခြားရောက်တိုင်း သူ့ဒေသနဲ့သူဝတ်ပေမယ့်တခါမှာ လန်ထွက်နေအောင်မ၀တ်ဖူးပါဘူး ဘီယာ ဗူးတောင်မကိုင်မိဘူး .
တွေ့လိုက်ချင်တယ် အဲလိုမျိူးတွေ .
ဘာတွေမှန်းကိုမသိဘူး အာရုံနောက်တယ် သကြားလုံးလေးရေ ဘလော့သာဘလော့လိုက်ကောင်းတယ်း)
အစောကြီးထပြီး ပေါက်ကွဲနေတာလား။ ကန်ဒီပိစိပေါက်ကွဲတာနဲ့ အပေါ်က ဒိုးကန်တောင် ရောယောင် ပေါက်ကွဲသွားတယ်။ ခုတလော ပေါက်ကွဲတာတွေ များလွန်းလို့ ကြောက်နေပါတယ်ဆိုမှ။း)
အင်း.. ဘယ်သူတွေ ထပ်လာပြီး ပေါက်ကွဲကြပြန်ဦးမလဲ မသိ။ မြန်မြန်လှစ်မှ။
December 30, 2011 at 8:47 AM
ဟစ်တလာလို့ကိုယ်အမျိုးပဲချစ်ပီးဂျုးလူမျိုးတွေ
သတ်တဲ့ နာဇီစနစ်တော့မကြိုက်ဘူး ဒါပေမယ့်
ကိုယ့်လိူမျိူးကို ချစ်ပြီး သူများလူမျိုးကို မနစ်နာစေတဲ့
လူတိုင်ကို အလေးပြုတယ်..အော် နောက်တစ်ခု
ကိုယ့်ဘ၀ကောင်းစားရေးပဲကြည့်ပြီး နိုင်ငံခြားသားကို လက်ထပ်တဲ့ အမျိုးဖျက်ဆိုရင်လည်း ကြည့်မတတ်ဘူး
ဘာကြောင့်ပဲယူယူ အမျိုးသားရေအမြင်နဲ့ မုန်းတယ်ကွာ..အချစ်ရေးနဲ့ ကြည့်ပြန်တော့လည်း...ကိုယ်ချင်းစာပါတယ်..အချစ်မှာမျက်စိမ၇ှိတယ်..တိန်..ဘာပဲပြောပြော ..ပေါက်ကွဲချင်နေတာမဟုတ်ဘူး ငါက ဖောက်ခွဲချင်နေတာနော်ဖွားလေး ကြည့်နေကြည့်စား...ဟွင်ဟွင်း ကွန်မန့် တော်တော်၇ှည်သွားဘီ....
December 30, 2011 at 12:42 PM
ကိုယ်တိုင် ဒီရောက်တော့လည်း ဒီလိုပဲ....၊ဒီမှာသေအောင်
ရတာကတစ်မျိုး...၊ဟင်း ပြောရရင် ပေါက်ကွဲသံစဉ်တွေ
December 30, 2011 at 4:45 PM
Mrs. Bagel said...
အဲဒီလူကိုက အလုပ်မဟုတ်တာ။ သူ့ကိုပြောလိုက်လို့ ရှက်ရမ်းရမ်းပြီး လျှောက်ပြောနေတာ။ ကန်ဒီရေ၊ မသိတဲ့လူဆို accept မလုပ်နဲ့။
December 30, 2011 at 5:41 PM
တစ်ခါထဲ Block လိုက်တာပဲ
December 30, 2011 at 9:30 PM
ညီမငယ်ရေ နောက်ဆိုရင်တော့ သတိနော်
December 30, 2011 at 9:41 PM
သူက ဦးသန့် ရေးထားတဲ့ စာမတွေ့လို့လားနော်...!
"ဘယ်နေရာရောက်ရောက် မြန်မာဟာ မြန်မာပါဘဲ.."
December 30, 2011 at 10:17 PM
ညင်းညင်း ............ ဒါမျိုးကို အလျှော့ပေးလို့ဘယ်ဖစ်မလဲ ဒီဒီရယ် ၊ ချချ ၊ နင့်နောက်မှာငါရှိတယ် ၊ လုပ်ပလိုက် ..........ညင်းညင်း
December 31, 2011 at 1:24 AM
Block မလုပ်ပဲ ဒီ post လေးပေးဖတ်လိုက်ပါလား
January 5, 2012 at 2:01 PM
ဟုတ်ပါ့ နိုင်ငံခြားရောက်တိုင်း ဘဝင်ကိုင်တယ်ထင်နေကြတယ်။ အမှန်က သူတို့က အမြင်စောင်းနေကြတာ။ ပြောပြန်ရင်လဲ ယာယာလွန်ရာကျမယ်။ ဒီမှာ စိတ်ညစ်စရာပေါင်း သောင်းခြောက်ထောင်နဲ့ ရပ်တည်နေရတာတော့ မသိကြဘူး။ ဘယ်လိုလူတွေမှန်းကိုမသိဘူး။ ဟတ်ဟတ် :D :D :D သနပ်ခါးဘဲကြားကြီးနဲ့ တူတယ် ခစ်ခစ်။ :P
January 9, 2012 at 6:20 PM
နောက်ပြီးတွေ့နေမြင်နေရတာတွေရှိသေးတယ်... စကာင်္ပူကမိန်းကလေးတွေဆိုရင် ပျက်စီးနေတယ်လို့ပြောကြတာ... ဖေ့ဘွတ်တို့ ဘာတို့ပေါ်မှာ လက်ချိုးရေလို့ရတဲ့ အရေအတွက်လေးကို ဓာတ်ပုံတွေဘာတွေ့တွေ့... ဖော်ဝက်မေးလ်တွေကနေ သူတို့ကိုထားသွားတဲ့မိန်းကလေးကို ယောကျာင်္းတွေတန်မဲ့ အသားရေလိုက်ဖျက်(ပြောတော့ မိန်းကလေးတွေကောင်းစေချင်လို့ဆိုတဲ့ အကာအကွယ်နဲ့)... မမြင်ချင်မှအဆုံး...
နောက်ဆုံးကျတော့ မြန်မာပြည်ကလူတွေက စလုံးရောက်ရင်ပဲ မိန်းကလေးတွေပျက်စီးနေသလိုလိုထင်... မဗေဒါလဲ အဲလိုလူမျိုးတွေတွေ့ပါများလို့နောက်ပိုင်းဆို လာအက်ရင် ဘလော့စာဖတ်သူလားလို့မေးတယ်... မဟုတ်ရင် ဘလောက်လိုက်တာပဲ...
ရှိသေးတယ်... မြန်မာပြည်ကတချို့အမျိုးတွေနဲ့ သူငယ်ချင်းတွေ... နိုင်ငံခြားရောက်တာနဲ့ ဒူးနှံ့ပြီး ရွှေတွင်းထဲကနှိုက်ယူလို့ရနေတယ်ထင်နေလားမသိဘူး... ဘယ်သူနဲ့တွေ့တွေ့ ကိုယ့်ပဲလိုက်ကျွေးခိုင်းတယ်... လက်ဆောင်လဲကိုယ့်ပဲတောင်းတယ်... မြန်မာပြည်ပြန်လဲကိုယ်ပေးရ... နိုင်ငံခြားရောက်လဲကိုယ်ပဲ ဒကာခံရ... မပေးချင် မကျွေးချင်လို့ပြောတာမဟုတ်ဘူး... ဒါပေမဲ့ နိုင်ငံခြားကလူမို့ နင့်မှာတာဝန်ရှိတယ်ဆိုတဲ့ အထာနဲ့လာပြောတာကို စိတ်တိုတာ...
ဟိုးတစ်လောက မြန်မာပြည်ပြန်လာမယ်လို့ အွန်လိုင်းစာရေးတဲ့အသိုင်းအ၀ိုင်းသူငယ်ချင်းတချို့ကိုပြောတော့ အားပါးတရပြန်လာတဲ့ ငါလူစုထားမယ်တဲ့... ကိုယ်ကတော့ပျော်သွားတာပေါ့... နောက်တော့ နင်ဘယ်ဆိုင်လဲရွေးဆိုတော့... ကိုယ်ကလဲ American system ထင်တာပေါ့... ဘယ့်နှယ့် အယောက် ၂၀လောက်ရှိတာ... နောက်မှ ကိုယ်ကတွေ့ချင်မှတော့ ကိုယ်ကကျွေးရမှာပေါ့တဲ့... ကျွေးလိုက်ရတာကိစ္စမရှိဘူး... ခင်လို့လာတယ်ဆိုတာပဲဖြစ်စေချင်တယ်... ကျွေးလို့လာတာမဖြစ်စေချင်ဘူး... ကိုယ်ပဲခင်စရာမကောင်းလို့ထင်ပါတယ်... အဲကိစ္စက လွန်ခဲ့တဲ့ ၂နှစ်လောက်ကဖြစ်တာပါ... ဘယ်သူ့မှမပြောဖြစ်သလို ဘလော့ပေါ်လဲမရေးဖြစ်ဘူး...
January 10, 2012 at 10:14 AM
အလှူငွေများ ကောက်ခံနေပါသည် ^_^
ကြိုက်မိသော သီချင်းများ ♫♪
ဒီဇင်ဘာပိတ်ရက်မှာ ဘာလုပ်မယ် (Tag)
Orchard မှာ ဒီလို ဒီလို....
ဘူဖေး (Again xD)
မျက်ကပ်မှန်များ (သို့) Contact lenses
Ready for Winter??